Nzuzo Nzuzo na Kuki - RayHaber
HomeRayHaber - newsgbọ okporo ígwè na ọsọIwu Nzuzo na Kuki
Iwu Nzuzo na Kuki
Nabata na ebe nrụọrụ weebụ RayHaber,
Usoro nkwekọrịta nzuzo nke m na-esonụ na-achịkwa ndokwa nke ozi na ọrụ Rayhaber nyere ndị ọrụ anyị bara uru.
Onye ọ bụla na-abanye ma ọ bụ mezigharịa ụdị Web Weebụ RayHaber ga-ewere ya na ọ gụọla ma kweta ihe ndenye nke "Ozi Nchịkwa", Nkwupụta nzuzo m "na Bil Okwu nke Ray.
RayHaber nwere ike iji ozi ezukọtara site na ndị ọbịa na ndị ọbịa na-aga na Websaịtị iji duzie nyocha ọ bụla. RayHaber nwere ike ịkekọrịta ozi a na ndị mmekọ azụmahịa. Otú ọ dị, e nweghị ike ịkekọrịta ozi-e na ozi ndị ọzọ nke onye ọ bụla, ụlọ ọrụ, nzukọ ma ọ bụ nzukọ ọzọ n'enweghị nkwenye onye ọrụ.
RayHaber anaghị ebipụta aha ọ bụla e-mail, aha, aha, nọmba ekwentị na ozi ọ bụla abanyela n'oge ndebanye aha na Web Site ma ghara iso onye ọ bụla na-azụ ahịa, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ òtù ọzọ soro ya ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ akọwaghị ya.
RayHaber bụ ozi gbasara gị nanị na ikpe ikpe iwu na usoro iwu: 3. megheere ndị mmadụ.
a.) Ọ bụrụ na ndị uweojii nwere akwụkwọ arịrịọ,
b.) iji chebe ma chebe ikike nke RayHaber.
c.) N'okpuru iwu ndị ị nabatara n'okpuru usoro eji.
Enwere ike ịlele ozi nkeonwe gị naanị na RayHaber. A gaghị ere ozi a, gbazite ma ọ bụ gbanwere ya na ụlọ ọrụ ọzọ ma ọ bụ nzukọ ọ bụla. 3 ma e wezụga na usoro nke UM Confidentiality Agreement haricinde. ọ bụghị ndị mmadụ n'otu n'otu. RayHaber na-ewe ihe niile nwere ike ime iji mezuo ọnọdụ ndị o mere na nkwekọrịta a.
A na-echekwa ozi nke RayHaber nakọtara na ebe dị nchebe nke na-abụghị ọha na eze. RayHaber na-eji usoro ụlọ ọrụ ọ bụla chebe ozi na gburugburu ebe obibi.
I nwere ike imelite ma gbanwee ozi nkeonwe ị banyere n'oge ndebanye aha n'oge ọ bụla. A na-enye RayHaber ikike ihichapụ ma ọ bụ kwụsịtụ akaụntụ gị ma ọ bụrụ na ịkwadoghị nkwekọrịta nzuzo nzuzo nke a ma ọ bụ Nkwekọrịta Ọrụ Ray.
N'ihi ọdịdị nke Ịntanetị, a ga-ekesa ozi na Ịntanetị na-enweghị nchekwa nchedo zuru oke ma nwee ike weghaara ya ma jiri ya mee ihe. RayHaber abụghị maka mmebi nke na-esi na iji ya na ojiji.
N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịnakọta ozi gbasara onwe gị. Ihe atụ nke ụdị ozi a bụ ụdị ihe nchọgharị ịntanetị ị na-eji, sistemụ arụmọrụ gị, aha ngalaba nke saịtị ahụ ị rutela na saịtị anyị site na njikọ ma ọ bụ ad.
Enwere ike itinye akwụkwọ na kọmputa gị mgbe ị gara na saịtị. Ozi a ga-agbanye ụdị nchịkọta kuki ma ọ bụ faịlụ yiri ya ma nyere anyị aka n'ụzọ ole na ole. Dịka ọmụmaatụ, kuki ga-enye anyị ohere ịhazi saịtị na mgbasa ozi dịka ọdịmma na mmasị gị. Fọrọ nke nta ka ihe nchọgharị weebụ niile nwere nhọrọ maka ihichapụ kuki site na draịvụ ike gị, na-egbochi ha ka edere ya, ma ọ bụ nata ozi ịdọ aka ná ntị tutu echekwa ya. Biko jaa aka na faịlụ enyemaka gị na ozi ojiji maka ozi ndị ọzọ.
A na - eji adreesị IP gị mee ka Web Site na sava anyị na - agba ọsọ, iji jikwaa ma dozie nsogbu. A na-eji adreesị IP gị mee ka ị mata.
Nke a Weebụ Web na-enye njikọ weebụsaịtị ndị ọzọ. Nkwupụta nzuzo dị irè naanị n'ime Web Site a ma ọ dịghị ekpuchi weebụsaịtị ndị ọzọ. Usoro Nzuzo na Usoro ojiji nke saịtị ndị metụtara njikọ nke njikọ na weebụsaịtị a na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ a ga-eji mee ihe. A na-atụ aro ka ị gụọ Nzuzo Nzuzo na Usoro eji ederede nke saịtị ndị ahụ na weebụsaịtị ndị ọzọ ị na-ejikọ na njikọ a na Weebụ Weebụ a.
Ozi nke onwe ma ọ bụ ozi ụlọ ọrụ, adreesị ozi-e, ọnụ ọgụgụ na ozi profaịlụ nke ndị ahịa anyị ndị na-eji akụrụngwa anyị anaghị akpakọrịta na ndị ọzọ n'ụzọ ọ bụla.
A na-echekwa ndekọ ndị dị na saịtị ahụ na nzuzo ma e wezụga n'ihi ngwa ndị nwere ike ịme site n'ọdụ ụgbọelu (Public Prosecutor's Office, Security Informatics Bureau). A na-echekwa ndetu ịnweta n'oge 180 ụbọchị.
Nyocha ndị nleta, ozi njirimara nke ndị ọbịa, ozi nleta (IP, timestamp, useragent) na-edebe nzuzo, gụnyere ndị nke News System. RayHaber nwere ikike ịgbanwe ozi ọ bụla n'ime ederede a. Site n'iji saịtị a, ikwenye na mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla na nke a na Confidentiality Garanti.
All nwebisiinka nke ụdị ọdịnaya ọ bụla, dị ka koodu, ozi, foto, ajụjụ ọnụ, na ihe ndị ọzọ, bụ RayHaber.com. A na-echekwa isiokwu niile, ihe onwunwe, foto, faịlụ dị mma, mmemme, vidiyo, ụkpụrụ na nhazi na RayHaber.com site na iwu nwebisiinka. Ha enweghị ike ị depụtaghachi, kesaa, gbanwee ma ọ bụ bipụtara n'ụdị ọ bụla na-enweghị ikike ederede RayHaber.com. Anaghị emepụta ma jiri ya mee ihe n'enweghị ikike.
Njikọ ndị dị na RayHaber.com na-emeghe na ibe dị iche. Ndị na-ede akwụkwọ na-ahụ maka isiokwu bipụtara na nkọwa. RayHaber.com nwere ike ịgbanwe oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. Anyị enweghị ihe kpatara nsogbu ọ bụla nke ozi dị na saịtị a.
A na-emeghe njikọ niile dị na saịtị na ibe dị iche. RayHaber.com abụghị ọrụ maka njikọ ndị ọzọ.
RayHaber na-enye mkpa maka nzuzo gị na ndị ọbịa gị na nkwa ịgbaso iwu ndị edepụtara na isiokwu ndị na-esonụ.
© Copyright 2019 RayHaber.com Ikike niile echekwala.
Ụgbọ njem ụgbọ mmiri na-adọrọ adọrọ nke na-ebu nzuzo 05 / 03 / 2014 Ụgbọ njem ụgbọ mmiri a na-atụ egwu na-abịa ìhè: A na-ebubo na ọrụ dị egwu nke ngwa AKP, nke bụ ihe nzuzo nzuzo nke gọọmentị AKP, abiala. Dị ka Omar Mmiri ara ehi na Ökkeş koskaan ozi ọma, na-AK Party ọchịchị, nke na-adọta uche nke ụwa ọha na ya ibu ọrụ na Turkey, omume ga-ebu on na ikpeazụ nzọụkwụ ka a ná mba ọzọ. N'ezie, na-emepe emepe ahia mmekọahụ n'etiti Turkey na n'ebe ugwu Iraq na-inweta ọhụrụ akụkụ. Istanbul Turkey si Erbil na-aga n'ihu njem groundbreaking elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè ọrụ na Turkey 'nwere ike ghara inwe ndị na-agba ịgba ma anya. Istanbul-Ankara-Mersin-Gaziantep-Sanliurfa na Diyarbakir '
Usoro okporo ụzọ na-agbanye okporo ụzọ 27 / 08 / 2012 Binali Yıldırım, Minister of Transport, Marine Maritime Affairs and Communications, natara arụmọrụ nke oge mbụ nke Republic na nwube ụgbọ okporo ígwè. Ọ na-nụrụ nke ọṅụ, nganga na gị mkpa, "ka o kwuru. General Directorate nke Republic of Turkey State Railways (TCDD) kwuru na ọsọ kacha nyere na-adịbeghị anya ka ndị na-ewu ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè e," railroads, dị ka xnumx't n'ihu dị ka Republic afọ mbụ ọzọ a kwuo iwu " ọ kọwara. Minister Yıldırım, Erzincan ẹkenịmde ke Refahiye Culture na Honey Festival, kwuru, sị: anọ mere siri ike okporo ígwè "otu penny na e mere nke ha mere na ugboro anọ okporo ígwè enweghị agbaziri. anyị na ha na ha na-ekwu folks parsing ...
Ndị Akụ na Ụgbọ okporo ígwè na-aghọ Ụkpụrụ Ọchịchị 09 / 12 / 2016 Tinyere AK, okporo ụzọ okporo ụzọ aghọwo ụkpụrụ nke mba: Minista Ụgbọ njem, Oké Osimiri na Nkwurịta Okwu Ahmet Arslan kwuru, sị: Ụgbọ okporo ígwè na AK Party aghọwo iwu obodo. 10 puku 950 kilomita okporo ígwè 12 biini 532 mụbara ruo kilomita. 2 449 5 8 308 700 13.7 tinyere ogologo nke akara mgbaàmà wepụrụ na kilomita. Minister of Transport Arslan, General Directorate of Highways, General Directorate of Civil Aviation, Information Technology banyere ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ndị nnọchiteanya. Minista Arslan kwuru na e tinyewo 14.7 ijeri nde XNUMX ma na oke nke ụlọ ọrụ njem na ozi-nkwurịta okwu maka ngwaahịa mba ahụ bụ XNUMX.
Uzo okporo ụzọ weghachite n'ime iwu obodo 25 / 07 / 2017 On September 23 1856 na-amalite na-ewu nke Izmir-Aydin ụgbọ okporo ígwè akara, na-agbanwe na-elekọta mmadụ na ihu igwe nke Anatolia, ọ bụghị mejupụtara a gbanwere na omenala na ụba na udi. Site na 1856 ruo 1923 4.136 kilomita site na Ottoman Period ketara site na ụgbọ oloko Republic. Nnukwu Onye Ndú, Mustafa Kemal Atatürk, malitere njem ụgbọ okporo ígwè ma wuo okporo ígwè 80 kilomita na 3.000 ebe ọnọdụ ala dị njọ. A ruru ngụkọta okporo ígwè okporo ígwè 1950 ruo mgbe 3.764. N'oge a, a na-ewere okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị ka ọrụ mmezigharị na mmemme mmadụ niile nke gụnyere mmepe na mmepe. N'etiti 1950 na 2002 UM
Minista Arslan: "Anyị mere okporo ụzọ n'ime ụkpụrụ obodo" 17 / 03 / 2018 Transport, Maritime Affairs na Communications Minister Ahmet Arslan, Itu Maslak Campus maara ihe Young Kulübü'n site University of Suleyman Demirel Cultural Center haziri "Transportation, Turkey Access Me" zutere na-eto eto na ndị mmadụ na ihe omume nke isiokwu. Armstrong, na-ezo aka ọrụ na iga oru, "15 afọ gara aga, esịtidem na ngụkọta 35 nde njem mgbe ebu on mpụga akara, anyị kwagara afọ ikpeazụ 193 nde njem. 55 Total akụ nwere ọdụ ụgbọ elu. Na 50 mba na mba gburugburu 60 taa ama ka 120 mgbe anyị na-efe efe ka 296 ebe." eji okwu eme ihe. Arslan na-agwa ndị na-asụ ụzụ olu ha, banyere 120 ijiji na mba ahụ kọrọ na ha dọtara ndị investors. Arslan, 15 ikpeazụ na Ars
Ụzọ okporo ụzọ na-aghọ Ụkpụrụ State 06 / 11 / 2018 Minista na ndi isi ahia Minista, Cahit Turhan, ndi agha mbu nke Republic mgbe otutu ndi oru uzo okporo-uzo di iche iche emeela ka ha buru iwu obodo, o kwuru. Minista njem na onye mmekorita Minista Cahit Turhan, na mmepụta nke mmefu ego nke Ngalaba maka afọ 2019 na Nchịkọta atụmatụ na ego nke nzuko omeiwu, na 100 Republic. Na mpi ụwa na ọrụ na ubi nke iga na akụrụngwa ọ kọrọ na ha iji nweta a na-agaziri Turkey. Mmepe nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-eleghara anya ọzọ ke akpa afọ mgbe ala iwu nke Republic mata na ha na-Turhan, ụgbọ okporo ígwè investments na-eme ka aku na uba, kọrọ na ha mepụtara lọjistik akụrụngwa na-eme. Gbanyụọ RAILWAY RAILWAY NA TRANSPORT Ụbọchị Silk TA
Ụlọ ọrụ BC1 (Ọkwá Tube Tunnel Crossing Contract) 02 / 07 / 2012 BC1 Agreement bịanyere aka na 06 May 2004 na 16 banyere n'ụzọ zuru ezu n'ime ndị si July 2004, 27 2004 mere nrubeisi na akụkọ ihe mere eme August malitere dị ka ahụ n'ezie na-ewu usoro. (BC1 Bosphorus Okporo ígwè tube agafe Construction ọrụ nkwekọrịta akwụkwọ jbıc't ihu ọma 16 ẹka July 2004 Convention na ụbọchị banyere n'ime ike. The Convention e mere iji napụta ebe ndị ngo 42 ụbọchị si na ụbọchị.) Ịbanye nke BC1 nkwekọrịta 06 May 2004 Archaeological gwupụtara amalite nke Oru 17 2004 June JBIC Ihu (Entry n'ime ike nke Convention) July 16 2004 Location nzipu na-arụ ọrụ ...
N'ikpeazụ, a bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ụlọ ọrụ ụgbọ ala Balbaova 03 / 03 / 2013 N'ikpeazụ, Balçova debara aha ụlọ ọrụ ụgbọ ala ahụ maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala ma debanye aha nkwekọrịta ahụ maka iwu ụlọ ọrụ ụgbọ ala. Obodo Municipality nke Izmir abanyela nkwekọrịta na STM, nke meriri obi maka nyochagharị nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala nke 6. STM ga-emezigharị ihe owuwu ụgbọ ala Baldova n'ime otu izu. Na njedebe nke okporo ụzọ iwu nke dugara nlọghachi nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala nke ụgbọ ala na-alọghachi n'akụkọ agwọ nke Izmir Metropolitan Municipality, usoro ahụ na-aga n'ihu malitere. Mgbe njedebe site na GCC, obi ebere ndị ụlọ ọrụ STM System Cable Car na-enweta bụ nke kachasị mma nke 1 nde 2012 puku na February 10 N
Bursa Yenişehir gbara ụgbọ okporo ígwè ọsọ ọsọ na YSE-Tepe Partnership 30 / 12 / 2011 Giant ngo signatures A tụbara Transport, Maritime Affairs na Communications Minister Binali Yildirim, si Ankara ka Konya, Ankara ka Istanbul si Ankara ka Sivas, Ankara na Bursa, Seljuk, ọzọ ụzọ ọ bụla ọzọ Ottoman Turkey na isi obodo ya kọrọ na otu n'ime ọrụ YHT. General Directorate nke Turkish State Railways ẹkenịmde ke Bursa High Speed ​​Train (YHT) Project Lightning-ekwu okwu na ndị bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado ememe, kwuru na taa bụ a obi ụtọ ụbọchị nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ha kwuru na ha mere a ọhụrụ mgbakwunye na MDS akara. Bursa-Bilecik akara nke mbụ ogbo nke Bursa-Yenisehir akụkụ nke nke chọrọ uru na bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado ememe Lightning, n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke Republic of Turkey bụ dị ka ihe dị mkpa dị ka onwe, malitere ebe a nnwere onwe na-alụ, na-jisiri si Ankara ụgbọ okporo ígwè ...
Ọrụ Marmaray CR3 Nkwekọrịta: Gebze - Halkalı Mmelite nke usoro ntanetị: Ụlọ ọrụ, Ngwá Ọrụ na Nhazi 03 / 01 / 2011 Republic of Turkey Ministry of Transportation General Directorate of Railways, Ọdụ Ụgbọ Mmiri na Ọdụ Construction General Directorate (DLH) Republic of Turkey, Ministry of Transport, Railways, Ports na Ọdụ Construction General Directorate - DLH (dịrị gaba n'ime ebe "Ebe E Si Nweta na-Party" dịrị gaba n'ime ebe), na European Investment Bank (EIB na Council of Europe Development Bank (ECU) (nke a na-ezo aka ma "Bank") natara ego iji kwụọ ụgwọ Marmaray Project. Nke a na - akpọ Òkù Mba Nile, Gebze-Halkalı Ịkwalite usoro ndọtị: Mwube, Ngwá Ọrụ na Mechanical Systems: CR3 Contract. Ọrụ Marmaray bụ mmelite nke usoro ntanetị dị n'èzí n'akụkụ abụọ nke Bosphorus na ụzọ ụgbọ okporo ígwè
Ụgbọ njem ụgbọ mmiri na-adọrọ adọrọ nke na-ebu nzuzo
Usoro okporo ụzọ na-agbanye okporo ụzọ
Ndị Akụ na Ụgbọ okporo ígwè na-aghọ Ụkpụrụ Ọchịchị
Uzo okporo ụzọ weghachite n'ime iwu obodo
Minista Arslan: "Anyị mere okporo ụzọ n'ime ụkpụrụ obodo"
Ụzọ okporo ụzọ na-aghọ Ụkpụrụ State
Ụlọ ọrụ BC1 (Ọkwá Tube Tunnel Crossing Contract)
N'ikpeazụ, a bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ụlọ ọrụ ụgbọ ala Balbaova
Bursa Yenişehir gbara ụgbọ okporo ígwè ọsọ ọsọ na YSE-Tepe Partnership
Ọrụ Marmaray CR3 Nkwekọrịta: Gebze - Halkalı Mmelite nke usoro ntanetị: Ụlọ ọrụ, Ngwá Ọrụ na Nhazi